ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အသစ်ပြောင်းပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အသစ်ပြောင်းပြီ
Posted by Yan Shin on Aug 1, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 11 comments
ကျွန်တော်တို့ ညောင်တုန်းကျွန်းရေနက်ကွင်း စိုက်ကွင်းတဲမှာ နေတုန်းကပါ။
သူဌေးက ကက်ဆက်တစ်လုံး ဘက်ထရီနဲ့ ထားပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငကြပ်ကောင်ကိုစည်သူတို့က (အဲဒီတုန်းက) ခေတ်စားတဲ့ လေးဖြူရဲ့ ပင်လယ်အော်သံတို့ ဇော်ဝင်းထွတ်ရဲ့ ဂျစ်ပစီမိုးတိမ်တို့ ငှက်ကြီး(ထူးအိမ်သင်)တို့ ကြိုက်ကြတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့နားရင် ကက်စက်ဖွင့်ရင် အဲဒီတိတ်ခွေတွေပဲ ဖွင့်ပါတယ်။
တိတ်ခွေပုံ အပေါ်ပိုင်းမှာ အဲဒီတိတ်ခွေတွေက နေရာယူမြဲပေါ့။
တပည့်ကျော် ကျော်ထွေးတို့ ရွာထဲက လာလည်တဲ့ ကျော်ထွေးသူငယ်ခြင်းတို့တစ်တွေ ဖွင့်ရင်တော့ ဟသာင်္တထွန်းရင်တို့ တွံတေးသိန်းတန်တို့ပါပဲ။ အဲဒီအခါ ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တုန်းက အောက်ပိုင်းရောက်နေတဲ့ အခွေတွေဟာ တိတ်ခွေပုံရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို တက်လာခဲ့ပြီပေါ့။
ကျွန်တော်ဟာ တိတ်ခွေတွေ စာအုပ်တွေကို စနစ်တကျ စီထားတတ်ယုံမက အိပ်ယာခြင်ထောင်စောင်တွေကိုလည်း စနစ်တကျ ခေါက်သ်ိမ်းထားတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဇီဇာကြောင်တတ်သူမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော့်အ၀တ်အစား သူများယူဝတ်တာ ကျွန်တော်အိပ်ယာ သူများလာအိပ်တာကိုတော့ မနှစ်သက်ပါဘူး။
ကျွန်တော်စိုက်ကွင်းတဲမှာမရှိတဲ့အခါ မောင်ကျော်ထွေးနဲ့ သူ့သူငယ်ခြင်းတွေလာရောက်လည်ပါတ်တဲ့အခါ ကက်စက်ကို ဖွင့်ယုံမက ကျွန်တော်အိပ်ယာမှာပါ လာရောက်အိပ်စက် အနားယူတာတွေကို ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကက်ဆက်ခွေအပုံအနေအထား ကျွန်တော့်အိပ်ရာ အနေအထားတွေကိုကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
ကျွန်တော်မကြိုက်တတ်မှန်းသိလို့ ကျွန်တော်တို့စိုက်ကွက်တဲက ကလေးတွေ မောင်ကျော်ထွေးတို့တစ်တွေက ကျွန်တော်အိပ်ရာမှာ မအိပ်ကြပေမဲ့ ရွာတွင်းက လာလည်ကြသူမောင်ကျော်ထွေးတို့ သူငယ်ခြင်းတွေကတော့ ပြောထားပေမဲ့ လာလည်ရင် စည်းကမ်းမဲ့ဆဲ အိပ်ဆဲပါပဲ။
´ရွာတွင်းမှ လူစိမ်းများလာလျှင် ကျွန်တော်တို့မရှိပဲ ကျွန်တော်တို့မသိပဲ တဲပေါ်မတက်ရ´
အဲဒီနေ့က မောင်ကျော်ထွေးတဲစောင့်ကျလို့ တဲမှာကျန်ခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော်စိုက်ကွင်းကနေပြီး တဲကိုပြန်လာတော့ ကျွန်တော်တို့တဲက ဟသာင်္တထွန်းရင်ရဲ့ အမေနဲ့ရွာကိုလွမ်းတယ် သီခြင်းကို ကက်ဆက်နဲ့ အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတာကို အဝေးကနေပြီး ကြားရပါတယ်။ တဲကိုရောက်တော့ တဲရှေ့က ငှက်ပျောပင်ရိပ်မှာ မောင်ကျော်ထွေးရဲ့ အဖေထိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မောင်ကျော်ထွေးကတော့ တဲပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်လို့ အမေနဲ့ရွာကို လွမ်းနေပါလေရဲ့။
ကျွန်တော်ပြန်လာတာမြင်တော့ တဲရှေ့ငှက်ပျောပင်ရိပ်မှာထိုင်နေတဲ့ မောင်ကျော်ထွေးအဖေ ဦးကျော်သန်း ထလာပါတယ်။
ဦးဌေးတူမ မောင်ကျော်ထွေးညီမလေးနေမကောင်းလို့ အဲဒါ မောင်ကျော်ထွေးလုပ်ခလေး နဲနဲကြိုထုတ်ထားခြင်လို့ပါ
ရပါတယ်ဦးလေးရယ်… ဒါနဲ့ တဲပေါ်ကတော့စောင့်မနေဘူး ဘာလို့အောက်ကြီးမှာထိုင်နေရတာလဲ
တဲပေါ်လူစိမ်းမတက်ရဘူး ဦးဌေးကစည်းကမ်းထုတ်ထားတယ်ဆိုပြီး ဒီအောက်ကစောင့်နေခိုင်းလို့ပါ။
ကျွန်တော်မျက်နှာမှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှု့တွေဖြစ်သွားမလဲ မြင်ယောင်ကြည့်စမ်းပါ။
မောင်ကျော်ထွေးတို့ တိကျပုံ အမိန့်လိုက်နာပုံပြောပါတယ်။
ကြီးပွါးအုံးမှာ တက်လမ်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးတောင်ဖြစ်ထိုက်ပါရဲ့။
ကဗျာကရာဝမ်းသာ အမြဲဝမ်းနဲအောင်လုတ်တယ် Post Title ကြည့်ပီး ဝမ်းသာအားရ ဖတ်လိုက်တာ–
ဟာ ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်နော်။ကျွန်မ မလဲ အသစ်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ အဟောင်းကြီးတော့သွားရှာပီလားပေါ့။ဘယ့်နှယ်ရှင် မောင်ကျော်ထွေးမလဲ တိကျချက်ကတော့ ဆပ်ပြာဝယ်ခိုင်းတုန်းကနဲ့ တော့ကွာတယ်နော့
တိကျရင် အမိန့်လိုက်နာရင် တကယ် တပ်ချုပ်ကြီးဖြစ်မှာလား
ကောင်းမှုတော် ကိုရွှေချ တဲ.ဗိုလ်စုတ်
နင်မသေမရှင် ဖြစ်အုံးမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်
ဒီနေရာမှာကျတော့တော်တော်လေးကိုတိကျလွန်းတယ်နော်.. ဒါပေမယ့်ဆပ်ပြာဝယ်တုန်းကလဲသူကတိကျချင်တယ်ထင်ပါတယ် မေ့နေလို့သာ မပြောနိုင်တာထင်တယ်……….
ဗိုလ်မှူးကြီး ဆိုလို.ဖတ်လိုက်တာ ကျော်ထွေး တိကျပုံနဲ. ညားနေတယ်
ရွာမှာ တုန်းက ရဲတွေကို ကြည်.မရတာနဲ့ အဲလိုတိကျဖူးတယ်
အိမ်ကိုလာပြီး စပါးလာသိမ်းတာ ကျနော်.ကို ငါ.ညီ ခွေးကြည်.ပါအုံးတဲ.
စောက်မြင်ကပ်တာနဲ. ခွေးက ရဲကိုကိုက်တာကို မမောင်းပဲ ဒီတိုင်းကြည်.နေတာ
ပြီးမှ မအူမလည် လုပ်လိုက်တယ် ကျနော်လည်းမသိဘူးလေ ခဗျကြည်.ဆိုလို. ကြည့်နေတာလို.ပြောလိုက်တာ
ကလေးဆိုတော.လည်း ဘာမှလုပ်မသွားဘူး ကလေးပေမဲ. မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ရဲကိုမုန်းကြပါသည်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အသစ်ပြောင်းဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အသောင်းဖြစ်တာကို ပြောတာဗျို့….
အသောင်းဖြစ်ရင် အဟောင်းမချစ် တော့ဘူးပေါ့နော်
ခေါင်းစဉ်လေးမြင်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ လာဖတ်တာ ဟွန့် 
Grace က အကြံပြုထားလို့။ ခေါင်းစဉ်လေး အလန်းလေးပေးမှဆိုလို့ပါ။
ပြီးတော့လဲ တပ်ချုပ်ကြီးငယ်ငယ်က ကျော်ထွေးလို ခိုင်းလိုက်ရင် အတိအကျ လိုက်တာတတ်တယ်
ကိုကြောင်ကြီးပြောသလို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အသောင်းသာဖြစ်လို့ကတော့ ??????????????????????
မောင်ကျော်ထွေးကတော့ အမိန့်နာခံလိုက်ပုံများ သူ့ဆရာနဲ့တော့ ကွာပါ့……………..:P